အောင်မြင်၊ ကျော်ကြားသူတွေရဲ့ အလေ့အထကောင်း (၇) ခု
Frank| May 6, 2019 | Personal Development
?‍♂လူတိုင်းဟာ အောင်မြင်မှုကို လိုလားကြပါတယ်။ အောင်မြင်မှုကို ရယူနိုင်ဖို့လည်း အမြဲတမ်းကြိုးစားနေကြပါတယ်။?‍♂️ မိမိပန်းတိုင်အတွက် ကြိုးစားနေတဲ့လူတွေရှိသလို ပန်းတိုင်(လမ်း) ပျောက်နေတဲ့သူတွေလည်း အများအပြားပါ။ (SMART analysis ကိုအသုံးပြုပြီး သင့်ပန်းတိုင်အတွက် ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။) ? သင်ဟာ အနာဂတ်မှာ အောင်မြင်မှုတွေကို ရယူလိုသူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ သေချာတာက အောင်မြင်၊ ကျော်ကြားသူတွေရဲ့ အလေ့အထကောင်း (၇) ခုကို သိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုသိထားမှပဲ သူတို့ဆီက ယူသင့်တာကိုယူ၊ ပယ်သင့်တာကိုပယ်ပြီး သင့်ပန်းတိုင်အတွက် စနစ်တကျနဲ့ အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ??‍♂️?
?ဘဝမှာ အောင်မြင်နေသူတွေဟာ အရာရာကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်လေ့ ရှိကြပါတယ်။?‍♂️ ဒီလို ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုရှိမှသာ သင်က သင့်လုပ်ငန်းကို ဘယ်လောက်ထိ ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်၊ လွှမ်းမိုးနိုင်တယ်၊ သင့်လုပ်ငန်း အောင်မြင်ဖို့ လိုအပ်ချက်တွေက ဘာတွေဖြစ်မယ် စသည်ဖြင့် သိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ✨
၂။ ?ကိစ္စတစ်ခုကို အဆုံးထိ စဉ်းစားပြီးမှ စတင်လုပ်ဆောင်ပါ?
? ကိစ္စတစ်ခုကို စတင်မလုပ်ဆောင်ခင် အဆုံးထိ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ? သင် လုပ်မှာက ဘာတွေလဲ? ဘာကြောင့် အဲ့ဒါတွေကို လုပ်မှာလဲ? အဲ့ဒါတွေကို သင် ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ? သင် ဘယ်လို အခက်အခဲတွေတွေ့မှာလဲ? တွေ့တဲ့အခက်ခဲတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမှာလည်း စသည်ဖြင့် သေသေချာချာ စဉ်းစား၊ အဖြေထုတ်ပြီးမှ စတင်လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။❓?
၃။ အရင်လုပ်ရမယ့် ကိစ္စကို အရင်လုပ်ပါ ☝️?‍♂️
?‍♂️ကျွန်တော်တို့ မြန်မာစကားမှာ ‘အဓိကနဲ့ သာမည’ ဆိုတာရှိပါတယ်။ ဘယ်ဟာက အဓိကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဘယ်ဟာကိုအရင်လုပ်၊ ဘယ်ဟာက သာမညဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဘယ်ဟာကိုနောက်မှလုပ် စသည်ဖြင့် လူကြီးတွေ သွန်သင်ဆုံးမလေ့ရှိပါတယ်။?? ဥပမာ – သင့်ချစ်သူနဲ့ သင် ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ ချိန်းထားတယ်ဆိုပါစို့။?? သင်တို့ ရုပ်ရှင်လက်မှတ် မဝယ်ဘဲ ဒီအတိုင်း ရုပ်ရှင်ရုံထဲဝင်ကြည့်လို့ရပါသလား?? ?‍♂️တကယ်တော့မရပါဘူး။?‍♀ ?‍♀️ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရဖို့ ပထမဆုံး သင်လုပ်ရမှာက လက်မှတ်ဝယ်ခြင်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။?
၄။ မျှမျှတတ စဉ်းစားပါ ✅(Win/Win)✅
တစ်ခုခုကို စတင်လုပ်ဆောင်တော့မယ်ဆိုရင် နှစ်ဖက်စလုံး အကျိုးအမြတ် ရှိ၊ မရှိ စဉ်းစားပါ။ ❎ သင်ကသာနေမယ်၊ သင်နဲ့ပူးပေါင်းလုပ်မယ့်သူက နစ်နာနေမယ်၊ ❎ သင်ကနစ်နာနေမယ်၊ သင်နဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်မယ့်သူက သာနေမယ်၊ ❎ သင်နစ်နာသလို၊ သင်နဲ့ပူးပေါင်းလုပ်တဲ့သူမှာလည်း အကျိုးအမြတ်မရှိ။ ✔️ဒါ့ကြောင့် သင်ရော သင်နဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်မယ့်သူပါ အကျိုးရှိမယ့် အရာတွေကိုသာ လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။??
၅။ လူတွေကို နားလည်အောင် လေ့လာပါ?
?လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယာက်ကြားမှာ ဆက်ဆံရေးဟာ အင်မတန် အရေးပါပါတယ်။? တခြားသူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေး အဆင်ပြေချင်ရင် သူတို့ကို သင် နားလည်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ?‍♂️ဘယ်သူက စတာကိုမကြိုက်ဘူးလဲ၊ ဘယ်သူက ဘယ်လိုအမူအရာတွေကို ကြိုက်တတ်သလဲ စသည်ဖြင့် သိထားမှသာ သူတို့နဲ့ အဆင်ပြေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။? စကားဝိုင်းတစ်ခုမှာ တခြားသူတွေကို အလှည့်မပေးဘဲ သင်ချည်းပဲ ပြောနေရင် တခြားသူတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ များသောအားဖြင့် အဆင်ပြေလေ့မရှိပါဘူး။ ? ဒါကြောင့်ပဲ လူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး အဆင်ပြေဖို့ လူတွေကို နားလည်အောင် လေ့လာသင့်ပါတယ်။ ?
၆။ ပူးပေါင်းအင်အား ???
?အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု (သို့) ?‍?‍?‍?မိသားစုတစ်ခုမှာ ပူးပေါင်းအင်အားဟာ များစွာ အရေးပါပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ သင်တစ်ယောက်တည်း မလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာတွေကို သင့် မိသားစု?‍?‍?‍? (သို့) ???သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အကူအညီနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်တဲ့ အချိန်မှာလဲ ဒီလိုပါပဲ၊ အလုပ်မှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံး ပူးပေါင်းပြီး စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ လုပ်ဆောင်ရင် အောင်မြင်မှုကို ရနိုင်ပါတယ်။? စစ်တုရင်ကစားဖူးတဲ့လူတိုင်းသိပါတယ်။ ပွန်း(pawn)တစ်ကောင်နဲ့ ဘစ်ရှော့(Bishop) တစ်ကောင်တွဲထားရင် အင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ဘုရင်မ(Queen) အတွက်တောင် တော်တော် အခက်တွေ့စေပါတယ်။
Related Post : စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ Black Hole အကြောင်း
၇။ အမြဲတမ်း လေ့လာပါ??
?ဓားဆိုတာ မသွေးဘဲထားရင် တုံးလာတတ်ပါတယ်။ ? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦးနှောက်ဟာလည်း ဒီလိုပါပဲ။ မသုံးဘဲထားရင် (သို့) အသစ်တွေကိုထပ်မလေ့လာရင် တုံးသွားတတ်ပါတယ်။ ?ဗဟုသုတရနိုင်တဲ့ စာပေတွေကို ဖတ်မယ်၊ ? ဗွီဒီယိုတွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် သင်ဟာ အဲ့လိုမလုပ်တဲ့လူတွေထက် အမြဲတမ်း နှာတစ်ဖျားသာနေမှာဖြစ်ပြီး သင့် အနာဂတ်အတွက်လည်း အရမ်းကို အရေးပါမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ✨
အပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတာကတော့ ‘အောင်မြင်၊ ကျော်ကြားသူတွေရဲ့ အလေ့အထကောင်း (၇) ခု’ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးဟာ သင့်အတွက် အလွန် အသုံးဝင်မယ်လို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်ပါတယ်။ (တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာ MotivSuccess ကနေ အခမဲ့ဆွေးနွေးပေးတဲ့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို Chat Box မှာ လာရောက် စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။) ဒီဆောင်းပါးကို သင့်သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း မျှဝေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဆောင်းပါးတွေကို အပတ်စဉ် ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ Facebook Page ကို Like & See First လုပ်ထားဖို့ သင့်ကို တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အောငျမွငျ၊ ကြျောကွားသူတှရေဲ့ အလအေ့ထကောငျး (၇) ခု
?‍♂လူတိုငျးဟာ အောငျမွငျမှုကို လိုလားကွပါတယျ။ အောငျမွငျမှုကို ရယူနိုငျဖို့လညျး အမွဲတမျးကွိုးစားနကွေပါတယျ။?‍♂️ မိမိပနျးတိုငျအတှကျ ကွိုးစားနတေဲ့လူတှရှေိသလို ပနျးတိုငျ(လမျး) ပြောကျနတေဲ့သူတှလေညျး အမြားအပွားပါ။ (SMART analysis ကိုအသုံးပွုပွီး သငျ့ပနျးတိုငျအတှကျ ပွငျဆငျနိုငျပါတယျ။) ? သငျဟာ အနာဂတျမှာ အောငျမွငျမှုတှကေို ရယူလိုသူတဈယောကျဆိုရငျတော့ သခြောတာက အောငျမွငျ၊ ကြျောကွားသူတှရေဲ့ အလအေ့ထကောငျး (၇) ခုကို သိထားရမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုသိထားမှပဲ သူတို့ဆီက ယူသငျ့တာကိုယူ၊ ပယျသငျ့တာကိုပယျပွီး သငျ့ပနျးတိုငျအတှကျ စနဈတကနြဲ့ အကောငျးဆုံးပွငျဆငျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ??‍♂️?
?ဘဝမှာ အောငျမွငျနသေူတှဟော အရာရာကို ကွိုတငျပွငျဆငျလေ့ ရှိကွပါတယျ။?‍♂️ ဒီလို ကွိုတငျပွငျဆငျမှုရှိမှသာ သငျက သငျ့လုပျငနျးကို ဘယျလောကျထိ ထိနျးခြုပျနိုငျတယျ၊ လှမျးမိုးနိုငျတယျ၊ သငျ့လုပျငနျး အောငျမွငျဖို့ လိုအပျခကျြတှကေ ဘာတှဖွေဈမယျ စသညျဖွငျ့ သိနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ ✨
၂။ ?ကိစ်စတဈခုကို အဆုံးထိ စဉျးစားပွီးမှ စတငျလုပျဆောငျပါ?
? ကိစ်စတဈခုကို စတငျမလုပျဆောငျခငျ အဆုံးထိ စဉျးစားသငျ့ပါယျ။ ? သငျ လုပျမှာက ဘာတှလေဲ? ဘာကွောငျ့ အဲ့ဒါတှကေို လုပျမှာလဲ? အဲ့ဒါတှကေို သငျ ဘယျလိုလုပျမှာလဲ? သငျ ဘယျလို အခကျအခဲတှတှေမှေ့ာလဲ? တှတေဲ့အခကျခဲတှကေို ဘယျလိုဖွရှေငျးမှာလညျး စသညျဖွငျ့ သသေခြောခြာ စဉျးစား၊ အဖွထေုတျပွီးမှ စတငျလုပျဆောငျသငျ့ပါတယျ။❓?
၃။ အရငျလုပျရမယျ့ ကိစ်စကို အရငျလုပျပါ ☝️?‍♂️
?‍♂️ကြှနျတျောတို့ မွနျမာစကားမှာ ‘အဓိကနဲ့ သာမည’ ဆိုတာရှိပါတယျ။ ဘယျဟာက အဓိကဖွဈတဲ့အတှကျကွောငျ့ ဘယျဟာကိုအရငျလုပျ၊ ဘယျဟာက သာမညဖွဈတဲ့အတှကျကွောငျ့ ဘယျဟာကိုနောကျမှလုပျ စသညျဖွငျ့ လူကွီးတှေ သှနျသငျဆုံးမလရှေိ့ပါတယျ။?? ဥပမာ – သငျ့ခဈြသူနဲ့ သငျ ရုပျရှငျကွညျ့ဖို့ ခြိနျးထားတယျဆိုပါစို့။?? သငျတို့ ရုပျရှငျလကျမှတျ မဝယျဘဲ ဒီအတိုငျး ရုပျရှငျရုံထဲဝငျကွညျ့လို့ရပါသလား?? ?‍♂️တကယျတော့မရပါဘူး။?‍♀ ?‍♀️ရုပျရှငျရုံထဲမှာ ရုပျရှငျကွညျ့ရဖို့ ပထမဆုံး သငျလုပျရမှာက လကျမှတျဝယျခွငျး ပဲဖွဈပါတယျ။?
၄။ မြှမြှတတ စဉျးစားပါ ✅(Win/Win)✅
တဈခုခုကို စတငျလုပျဆောငျတော့မယျဆိုရငျ နှဈဖကျစလုံး အကြိုးအမွတျ ရှိ၊ မရှိ စဉျးစားပါ။ ❎ သငျကသာနမေယျ၊ သငျနဲ့ပူးပေါငျးလုပျမယျ့သူက နဈနာနမေယျ၊ ❎ သငျကနဈနာနမေယျ၊ သငျနဲ့ ပူးပေါငျးလုပျမယျ့သူက သာနမေယျ၊ ❎ သငျနဈနာသလို၊ သငျနဲ့ပူးပေါငျးလုပျတဲ့သူမှာလညျး အကြိုးအမွတျမရှိ။ ✔️ဒါ့ကွောငျ့ သငျရော သငျနဲ့ ပူးပေါငျးလုပျမယျ့သူပါ အကြိုးရှိမယျ့ အရာတှကေိုသာ လုပျဆောငျသငျ့ပါတယျ။??
၅။ လူတှကေို နားလညျအောငျ လလေ့ာပါ?
?လူတဈယောကျနဲ့ တဈယာကျကွားမှာ ဆကျဆံရေးဟာ အငျမတနျ အရေးပါပါတယျ။? တခွားသူတှနေဲ့ ဆကျဆံရေး အဆငျပွခေငျြရငျ သူတို့ကို သငျ နားလညျထားဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ?‍♂️ဘယျသူက စတာကိုမကွိုကျဘူးလဲ၊ ဘယျသူက ဘယျလိုအမူအရာတှကေို ကွိုကျတတျသလဲ စသညျဖွငျ့ သိထားမှသာ သူတို့နဲ့ အဆငျပွမှော ဖွဈပါတယျ။? စကားဝိုငျးတဈခုမှာ တခွားသူတှကေို အလှညျ့မပေးဘဲ သငျခညျြးပဲ ပွောနရေငျ တခွားသူတှရေဲ့ စိတျထဲမှာ မြားသောအားဖွငျ့ အဆငျပွလေမေ့ရှိပါဘူး။ ? ဒါကွောငျ့ပဲ လူတှနေဲ့ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေး အဆငျပွဖေို့ လူတှကေို နားလညျအောငျ လလေ့ာသငျ့ပါတယျ။ ?
၆။ ပူးပေါငျးအငျအား ???
?အဖှဲ့အစညျးတဈခု (သို့) ?‍?‍?‍?မိသားစုတဈခုမှာ ပူးပေါငျးအငျအားဟာ မြားစှာ အရေးပါပါတယျ။ တဈခါတဈရံ သငျတဈယောကျတညျး မလုပျဆောငျနိုငျတဲ့အရာတှကေို သငျ့ မိသားစု?‍?‍?‍? (သို့) ???သူငယျခငျြးတှရေဲ့ အကူအညီနဲ့ လုပျဆောငျနိုငျပါတယျ။ အလုပျလုပျတဲ့ အခြိနျမှာလဲ ဒီလိုပါပဲ၊ အလုပျမှာရှိတဲ့သူတှအေားလုံး ပူးပေါငျးပွီး စညျးစညျးလုံးလုံးနဲ့ လုပျဆောငျရငျ အောငျမွငျမှုကို ရနိုငျပါတယျ။? စဈတုရငျကစားဖူးတဲ့လူတိုငျးသိပါတယျ။ ပှနျး(pawn)တဈကောငျနဲ့ ဘဈရှော့(Bishop) တဈကောငျတှဲထားရငျ အငျအားအကွီးဆုံးဖွဈတဲ့ ဘုရငျမ(Queen) အတှကျတောငျ တျောတျော အခကျတှစေ့ပေါတယျ။
၇။ အမွဲတမျး လလေ့ာပါ??
?ဓားဆိုတာ မသှေးဘဲထားရငျ တုံးလာတတျပါတယျ။ ? ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ဦးနှောကျဟာလညျး ဒီလိုပါပဲ။ မသုံးဘဲထားရငျ (သို့) အသဈတှကေိုထပျမလလေ့ာရငျ တုံးသှားတတျပါတယျ။ ?ဗဟုသုတရနိုငျတဲ့ စာပတှေကေို ဖတျမယျ၊ ? ဗှီဒီယိုတှကေို ကွညျ့မယျဆိုရငျ သငျဟာ အဲ့လိုမလုပျတဲ့လူတှထေကျ အမွဲတမျး နှာတဈဖြားသာနမှောဖွဈပွီး သငျ့ အနာဂတျအတှကျလညျး အရမျးကို အရေးပါမှာ ဖွဈပါတယျ။ ✨
အပျေါမှာ ဖျောပွထားတာကတော့ ‘အောငျမွငျ၊ ကြျောကွားသူတှရေဲ့ အလအေ့ထကောငျး (၇) ခု’ ပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီဆောငျးပါးဟာ သငျ့အတှကျ အလှနျ အသုံးဝငျမယျလို့ ကြှနျတျော မြှျောလငျ့ပါတယျ။ (တနင်ျဂနှနေတေို့ငျးမှာ MotivSuccess ကနေ အခမဲ့ဆှေးနှေးပေးတဲ့ အစီအစဉျရှိပါတယျ။ အသေးစိတျကို Chat Box မှာ လာရောကျ စုံစမျးနိုငျပါတယျ။) ဒီဆောငျးပါးကို သငျ့သူငယျခငျြးတှကေိုလညျး မြှဝနေိုငျပါတယျ။ ဒီလိုဆောငျးပါးတှကေို အပတျစဉျ ဖတျခငျြတယျဆိုရငျတော့ ကြှနျတျောတို့ Facebook Page ကို Like & See First လုပျထားဖို့ သငျ့ကို တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ။ ကြေးဇူးတငျပါတယျ။
Frank| July 8, 2019
Frank| June 24, 2019
Frank| June 17, 2019
Frank| June 10, 2019
Frank| June 3, 2019
ASEAN Youth Leadership Summit 2019 September 3, 2019
Hong Kong PhD Fellowship Scheme August 29, 2019
Sport Management Programme in English 2020 August 25, 2019
IUCHI Scholarship August 22, 2019
Scholarships For Chulalongkorn Univeristy August 20, 2019